5 Kacha mma anyị hụtụrụla Train Journeys Na Italy | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > 5 Kacha mma anyị hụtụrụla Train Journeys Na Italy
(Emelitere ikpeazụ On: 14/02/2020)
Train njem na Italy na-enye bụghị naanị nkasi obi ma ụfọdụ nnukwu echiche. Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere-ewere ụgbọ okporo ígwè na Italy bụ ohere anya na mara mma dị ka ị njem site n'otu ebe gaa ebe ọzọ. N'akụkụ ụfọdụ nke Italy, e nwere sinik ụgbọ okporo ụzọ gasị na-ihe karịrị nnọọ ụdịdị nke njem. Ndị a sinik ụgbọ oloko ga na-emeso gị ala gbara osimiri okirikiri echiche, ịrịba ama ugwu mma, sachaa ọdọ mmiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ebe a na- 5 kacha mma anyị hụtụrụla ụgbọ okporo ígwè Journeys na Italy.
Ka anyị na-emeghe ndepụta 5 kacha mma anyị hụtụrụla ụgbọ okporo ígwè njem na Italy na – Levanto ke La Spezia – Cinque Terre
Train ụzọ gasị na-eso Italy si dị ịrịba ama coastlines bụ n'etiti ndị kasị atọ ụtọ. The Cinque Terre ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi ise Italian Riviera obodo nta nke ndị mba na itunanya. Wetuo na windo panoramik ma maakwuo ugwu, na turquoise osimiri, bucolic ubi vaịn, na oliv. Were a ụgbọ okporo ígwè n'agbata Levanto na La Spezia maka a mkpirikpi ma mara mma ọmarịcha njem. Ozugbo unu ruru gị ebe, ị nwere ike mgbe ahụ emefu ụbọchị hiking ịtụnanya obodo.
#cinqueterre na L❤️ve site @andreabelussiphotographer #cinqueterrelove #love #italy #paradise #monterosso #vernazza #manarola #riomaggiore #corniglia #sea #ig_liguria_ #colors
A post na-akọrọ site Cinque Terre Italy (@cinqueterre_love) on Apr 9, 2016 na 3:22am PDT
From si Naples gaa Sorrento ma gafee ebe ndị ọkà mmụta ihe ochie nke Herculaneum na Pompeii. Nke a fabulous njem na-enye echiche nke Ugwu Vesuvius gbawara na Bay nke Naples n'ụzọ. Nke a ụgbọ okporo ígwè bụ n'ezie otu n'ime kacha mma anyị hụtụrụla ụgbọ okporo ígwè njem na Italy.
Rimini ka Catania – tinyere Italy n'ebe ọwụwa anyanwụ
Nke kacha mma ụzọ njem site Northern Italy na Southern Italy bụ ala East Coast ụgbọ okporo ígwè. The akara atọgbọ ahụ n'ụsọ oké osimiri n'ihi na a dum awa isii nke ịrịba mma. Malite na Rimini, jidere a oche n'ihu n'ihu ma na-a picnic na ị maka a fabulous njem! En-aga Catania, okporo ígwè obe lemon Asherim na lava aga, na-akwụsị na ụfọdụ na-akpali ụgbọ ofụri njem.
Messina na Catania Ụgbọ oloko
Syracuse ka Catania Ụgbọ oloko
Taormina ka Catania Ụgbọ oloko
Palermo na Catania Ụgbọ oloko
M window, Catania #flowerstagram #photooftheday #flowerslovers #flowerstyles_gf #loves_united_catania #flowers #vivocatania #amazing #catania #sun #autumn #autunno #sopretty #blooms #love #window #floral #nature #picoftheday #sunraylabs #flowersofinstagram #floweroftheday #flowermagic #tramonto # oge ntoju #instablooms #torino #cataniabedda #beautiful #soleil
A post na-akọrọ site E. Emancipato Photography © (@ edoardo.emancipato) on Nov 15, 2017 na 7:55am PST
Venice na Florence – 5 kacha mma anyị hụtụrụla ụgbọ okporo ígwè Journeys na Italy
Chọpụta abụọ nke Italy ama obodo a mara mma ụgbọ okporo ígwè na njem na-n'agbata. The njem site na Venice ka Florence ewe gị tinyere ume-inweta mma na maa mma obodo. Nke a na njem bụ naanị awa abụọ ogologo ma bụ n'ezie ihe ịnọ ahụmahụ. E nweghị ụzọ ka mma isi na-eme njem n'etiti obodo abụọ.
Milan ka Bolzano bụ njedebe ikpeazụ anyị maka 5 sinik ụgbọ okporo ígwè Journeys na Italy
Erite a magburu onwe ụgbọ okporo ígwè si Milan ka Bolzano. Inweta unu site na ejiji isi obodo nke ụwa na jagged na ịrịba ama nkume n'ugwu na-eme ka Italian Alps. Lee Italy ochie obodo, ebube obodo nakwa ihe ndị kasị mma na photographed ugwu na Europe. Abanye Bolzano bụ dị ka na-ahapụ Italy na abanye Germany, a obere obodo bụ German anya n'ihi na ọ bụ akụkụ nke Austria tupu Agha Iwa Mbụ. Nke a mara mma agbaga ụgbọ okporo ígwè na njem bụ kpokọtara!
Trento ka Bolzano Ụgbọ oloko
Milan ka Bolzano Ụgbọ oloko
Bologna ka Bolzano Ụgbọ oloko
Venice na Bolzano Ụgbọ oloko
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#okporo ụzọ #sinik #ihe nkiri longtrainjourneys Train Travel Echiche